प्रिन्टर किन्दै हुनुहुन्छ ? यी कुराहरू ध्यान दिनुहाेस् - Living with ICT
Home / Featured / प्रिन्टर किन्दै हुनुहुन्छ ? यी कुराहरू ध्यान दिनुहाेस्
विभिन्न कार्यविशेषका लागि फरकफरक प्रविधिमा आधारित धेरै प्रिन्टिङ प्रविधि अहिले उपलब्ध छन् । घरेलु प्रयोजन, साना ट्राभल कम्पनीदेखि विभिन्न काम गर्ने ठूला कम्पनीहरूले काम तथा प्रयोगको प्रकृतिअनुसार प्रिन्टरहरू प्रयोग गर्ने गर्दछन् । यसैगरी, थुप्रै आकारमा आउने प्रिन्टरहरूमा फोटोग्राफरदेखि मल्टिटास्किङ गर्ने प्रयोगकर्ताहरूलाई लक्षित गरी उत्पादन गरिएका पाइन्छन् । यसर्थ तपाईंले कस्तो किसिमको प्रिन्टर रोज्ने भन्ने कुराको निर्धारण पनि तपाईंको आवश्यकतामा नै भर पर्दछ । प्रिन्टर खरिद गर्नुअघि तपाईंले निम्न कुराहरूमा ध्यान दिनुहोस् :
प्रिन्टर प्रयोगको प्रयोजन
प्रिन्टरहरू विभिन्न प्रयोजन विशेषलाई लक्षित गरिएका हुन्छन् । यस्तोमा तपार्इंको आवश्यकता र कामको प्रकृतिले कस्तो प्रिन्टरको प्रयोग गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्दछ ।
होम युजरले पनि एउटा प्रिन्टरबाट धेरै कामको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । होम युुजरका लागि सानो अफिस/होम–अफिस कलर इंकजेट लिन उपयुक्त हुदछ । यस्ता प्रिन्टरहरू सिंगल–फङ्सन इन्जेक्टका लागि ३/४ हजार रूपैयाँदेखि इन्टरयाक्टिभ टच प्लानेलहरू, वेब कनेक्टिभिटी, क्लाउड प्रिन्टिङ र अन्य फिचरका लागि ५०/५५ हजारसम्ममा बजारमा उपलब्ध छन् ।
सानो बिजनेशका लागि अलइन अल वा मल्टिफङ्सन प्रिन्टरहरू उपयुक्त रोजाइ बन्न सक्दछन् । यसको खरिदमा पनि कम रकम खर्च हुने र एउटै मेशिनबाट प्रिन्ट, फोटोकपी, स्क्यान तथा फ्याक्ससम्मको काम गर्न सकिने भएकाले एकदमै राम्रो रोजाइ बन्न सक्दछ । यसरी बजेट र ठाउँको पनि बचत हुन्छ भने, मेन्टिनेन्समा पनि तपाईंले धेरै झन्झट बेहोर्नुपर्दैन ।
कर्पोरेट बिजनेश ठूलो हुने भएकाले यसमा कमको चाप धेरै हुन्छ र डकुमेन्टेशनका काम पनि धेरै नै हुने गर्दछन् । यसले गर्दा कर्पोरेटका लागि लेजर प्रिन्टरहरू उपयुक्त हुन्छन् । किनभने लेजर प्रिन्टरमा द्रुत गतिमा चल्ने प्रोसेसर, धेरै मेमोरी र लेजर प्रिन्टरले द्रत गतिमा धेरै प्रति डकुमेन्टहरू प्रिन्ट गर्न सक्ने क्षमतको इञ्जिन हुने भएकाले लेजर प्रिन्टर रोज्नु उपयुक्त हुन्छ ।
राम्रो प्रिन्टरको मूल्यांकन वा पहिचान गर्दा सबैभन्दा पहिला स्पेसिफिकेशन सूचीलाई राम्रोसँग हेर्नुहोस् । प्रिन्टरमा हेर्नुपर्ने मुख्य कुराहरूलाई तल प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रिन्टरमा हेर्नुपर्ने एउटा मुख्य विशेषता भनेको रेजोलुशन हो । रेजोलुशन भन्नाले प्रतिइन्चमा थोप्ला/बिन्दुहरू (dots perinch/dpi) को अधिकतम संख्यालाई बुझ्न सकिन्छ, जुन प्रिन्ट गर्न र ठाडो तथा तेर्सो दुवै तर्फबाट नाप्न पनि सकिन्छ । उदाहरणका लागि ६०० गुणा ६०० डिपिआई लेजर प्रिन्टरले एक वर्ग इन्च (1-inch square) भित्र ठाडो र तेर्सो दुवैतर्फ ६०० ओटा डटहरू अटाउँछन् । प्रिन्टरहरूले विशेषतः कागजमा मसी वा टोनरको प्रयोग गरेर छपाइ गर्दछन् । इंकजेटहरूमा नोजलको प्रयोग गरिएको हुन्छ, जसले धेरै साना मसीका थोपाहरूलाई छर्ने काम गर्दछ । जब कि लेजर प्रिन्टरहरूले टोनरका डटहरूलाई पगालेर कगजमा छाप्दछन् । प्रिन्टरको एक वर्ग इन्चमा जति डटहरूलाई खा“द्न सकियो छपाइको इमेज वा आकृति पनि त्यति नै प्रस्ट हुन्छ । यसरी, रेजुलेशन जति बढी छ, धेरै हदसम्म त्यसको छपाइको गुणस्तरमा पनि वृद्वि हुन्छ ।
यो विशेषताले कुनै प्रिन्टरले प्रतिमिनेटमा कति पेजहरू/फोटोहरू (ppm) छाप्न सक्दछ भन्ने कुरा देखाउँदछ । तपाईंको आवश्यकता र कामको प्रकृतिअनुरूपको प्रिन्टर खरिद गर्नुअनुरूप सो प्रिन्टरले प्रतिमिनेटमा छाप्न सक्ने क्षमताले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ । त्यसैले तपार्इंको आवश्यकताअनुरूपको प्रिन्टरको छपाइको स्पिड हेर्नुहोस् ।
प्रिन्टरले प्रयोग गर्ने युएसबी (USB/Universal Serial Bus) युनिभर्सल छ । त्यसैले अहिले सबै प्रिन्टरहरूमा युएसबी २.० पोर्ट राखिएको हुन्छ । वर्क ग्रुप प्रिन्टरहरूले त आरजे–४५ (RJ-45) कनेक्टरको मद्दतबाट स्ट्यान्डर्ड इथर्नेट केबलको प्रयोग गरी नेटवर्कभित्र पनि प्रिन्ट गर्न सकिने हुन्छन् । अझ बढी सहजताका लागि धेरै प्रिन्टर मोडेलमा प्रिन्ट सर्भरका साथै बिल्ट–इन वाइफाई र क्लाउड प्रिन्टिङजस्ता महत्वपूर्ण फिचरहरू समावेश गरिसकेका छन् । अहिले युजरलाई वेबबाट कुनै पनि डकुमेन्ट वा तस्वीर प्रिन्ट गर्न सकिने इमेल प्रिन्ट फिचर पनि केही मोेडेलहरूमा आइसकेको छ ।
प्रोसेर र मेमोरीजस्ता विशेषता तपार्इंले इंकजेट वा लेजर प्रिन्ट कुन किन्नुहुँदै छ भन्ने कुरामा विशेष महत्वपूर्ण राख्छ । इंकजेट लाइन प्रिन्टर हो, लेजरचाहिँ पेज प्रिन्टर हो । लाइन प्रिन्टरका लागि कम्प्युटरले आफ्नो मेमोरीमा पेजलाई कम्पोज गर्दछ र सानो प्याकेटका रूपमा प्रिन्टरतर्फ पठाउँदछ । त्यसैले यस्तो प्रिन्टरको हकमा प्रिन्टरको प्रोसेसर र मेमोरीले सामान्यतया खासै भिन्नता ल्याउँदैन । तर, पेज प्रिन्टरमा भने सम्पूर्ण पेज प्रिन्टरको मेमोरीमा सबै पेज बस्ने भएकाले लेजर प्रिन्टरमा मेमोरीको महत्वपूर्ण छ । टेक्स्ट मात्र प्रिन्ट गर्दा खासै मेमोरीको प्रयोग हुन्न । तर, तपार्इं उच्च रेजोलुशनका ठूला तस्वीर, ग्राफिक्स फाइलहरू प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने धेरै मेमोरी भएको प्रिन्टर छान्नुहोस् ।
इंक र टोनर
इंकजेट प्रिन्टरहरू उपलब्ध प्रिन्टरहरूमध्ये सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा खरिद गर्न पाइने प्रिन्टरहरू हुन् । यद्यपि, इंकको र स्पेसिएल्टी पेपर रिप्लेसमेन्टमा भने ओनरसिपमा थप मूल्य पर्न आउँदछ । इंकजेट प्रिन्टरका लागि अवश्यक इंक प्रति काट्रिज लगभग १ हजारदेखि ३ हजारसम्म पर्न आउँदछ र उच्च क्षमताका प्रिन्टर मोडेलहरूमा १ सयदेखि ८०० पेजसम्मका लागि पुग्दछ । अलि महँगा प्रिन्टरहरू भने प्रयोग गर्दैै जाँदा कम खर्चालु सावित हुन्छन् । किनभने यस्ता प्रिन्टरमा प्रत्येक रंगका लागि उच्च क्षमताको इंक ट्यांक र भिन्नै इंक ट्यांकको व्यवस्था हुन्छ । यसर्थ कुनै एउटा रङको इंक सकि“दैमा तपार्इंले सबै सबै रंग फेर्नुपर्दैन ।
अर्कोतर्फ लेजर टोनरको हकमा काट्र्रिजहरू मूल्य, उत्पादन र प्रिन्ट क्षमताका आधारमा फरक पर्दछ । पर्सनल लेजर प्रिन्टरमा प्रयोग भएको सानो काट्रिजलाई रु. १ हजार आसपास र उच्च क्षमताको नेटवर्क गु्रप लेजर प्रिन्टरको काट्र्रिजलाई रु. ३० हजारबराबर पनि पर्न सक्दछ । टोनरको मूल्य उच्च देखिए पनि यसले प्रतिफल राम्रो दिन्छ । लेजर प्रिन्टरमा प्रयोग हुने एउटा काट्रिजले सामान्यतया २५ सयदेखि १० हजार पेजसम्म प्रिन्ट गर्नलाई पुग्दछ भने कुनै कुनैले त ३० हजारसम्मलाई पुग्ने पनि दाबी गर्दछन् ।
Previous सुरक्षित एटीएम सेवाका लागि सानिमा बैंकले चिपमा आधारित कार्ड ल्याउँदै
Next रोबोटिक्स प्रतियोगिता ‘यन्त्र ५.०’ सम्पन्न